| ကြောင်းယုတ္တိဗေဒ \_ များ၏ဘာသာရပ်လေ့လာနေ အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
တချို့ကနည်းလမ်းများသည်အခြားတရားစီရင်ပိုင်များမှဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းစွာ, ဒါမှမဟုတ်, ပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်, လူ့စိတ်ကို။
ယုတ္တိဗေဒ (အယ်လ် -grech #955; .. #959; #947; #953; #954; #942; ညာဘက်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏သိပ္ပံ, #955 ထံမှဆင်ခြင်ခြင်း၏အနုပညာ; #972; #947; #959; #962; မိန့်ခွန်း, တစ်ဦးယုတ္တိဘာသာစကားအားဖွငျ့တရားဝငျမှတျပုံတငျဆင်ခြင်ခြင်း, အတွေး) အသိပညာဆိုင်ရာသိမှတ်ခံစားမှုများ၏ပုံစံများ, နည်းလမ်းများနှင့်ဥပဒေများ၏သိပ္ပံ, ။ ဤအသိပညာအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ရရှိသောဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကယုတ္တိဗေဒလည်းမှန်ကန်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ပုံစံများနှင့်ဥပဒေများ၏သိပ္ပံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်အငြင်းပွားမှုများ၏ဘာသာစကားကိုအတွက်ဖန်ဆင်းထားသည်ကတည်းကသက်သေပြခြင်းနှင့် disproof နေသော၏အထူးသဖြင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု, ယုတ္တိဗေဒတခါတရံဆင်ခြင်ခြင်း၏နည်းလမ်းများ၏သိပ္ပံ, သို့မဟုတ်အထောက်အထားနှင့် disproof ၏နည်းလမ်းများ၏သိပ္ပံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ သိပ္ပံအဖြစ် logic မဟုတ်အာရုံခံအတွေ့အကြုံကနေပေမယ့်အစောပိုင်းကရရှိသောအသိပညာ မှစ. , သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုကမကထပြုခဲ့ putm အတွက်အမှန်တရားအောင်မြင်ရန်လမ်းကိုလေ့လာနေဒါကြောင့်အီးလည်းအသိပညာ၏ output ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ၏သိပ္ပံအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Inferential အသိပညာယုတ္တိဗေဒနှင့်ယုတ္တိစဉျးစားတှေးချေါမှုနည်းလမ်းများ၏ဥပဒေများ၏လျှောက်လွှာ, အမှန်တရားရရှိနှင့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပိုမိုနက်ရှိုင်းအသိပညာနှင့်ဖြစ်ရပ်များလောကီသားတို့သည်ဤအသိပညာလျှောက်ထားရည်ရွယ်မဆိုယုတ္တိလုပ်ရပ်များ၏ရည်မှန်းချက်မှတစ်ဆင့်ရရှိခဲ့သည်။
ဥပစာ၏နိဂုံး (ညာအကြောင်းပြချက်) ရောက်ရှိရန်နှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. စစ်မှန်သောအသိပညာရယူ, ပိုကောင်းကိုလေ့လာအတွေး၏အရာဝတ္တုနှင့်ဖြစ်ရပ်ဆန်း၏အခြားရှုထောင့်နှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်ဆံရေး၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်ရန်မည်သို့ဆုံးဖြတ်ရန်ယုတ္တိဗေဒ၏အဓိကတာဝန်များကိုတစ်ခုမှာ။
Logic (ဂရိ logike) သည်သက်သေပြရန်နှင့်ချေပရန်နည်းလမ်းများ၏သိပ္ပံဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနည်းကျသီအိုရီအစုတစ်ခုစီသည်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့သောနည်းလမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ယုတ္တိဗေဒကိုတည်ထောင်သူသည်အရစ္စတိုတယ်ဖြစ်သည်။ inductive နှင့် deductive logic အကြားကွဲပြားခြားနားပြီး၊ ဂန္ထ ၀ င်၊ အလိုလိုသိမှု၊ တည်ဆောက်မှု၊ ပုံစံ၊
ဤသူအပေါင်းတို့သည်သီအိုရီစစ်မှန်တဲ့တရားစီရင်ပိုင်ကနေယူဆချက်စစ်မှန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုအကျိုးဆက်များဆီသို့ဦးတည်ထားတဲ့ဆင်ခြင်ခြင်း၏ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများ၏ကက်တလောက်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကတိကဝတ် share; ကက်တလောက်ဆော့ဖ်ဝဲယုတ္တိဗေဒ၏မူဘောင်အတွင်းမှာစည်းကမ်းအဖြစ်ပြုနေသည်။ calculi ။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, automata သီအိုရီ, ဘာသာဗေဒ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, နှင့်အခြားသူများအတွက်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုကစား application ကိုယုတ္တိဗေဒအရှိန်မြှင့်အတွက်အထူးအခန်းကဏ္ဍ။
66 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,277 စက္ကန့်ကျော် Generate ။